जुन हो बेबकुफ … | Shresthakedar's Blog
जुन हो बेबकुफ …
‘आइरन गेट’ पार गरेर तेह्रथुमको आठराई, चुहानडाँडामा फुरुंग पर्दै म आइए पढ्न तम्सिएको थिए”। दार्जिलिङतिरको प्रेरणादायी हावाले छोएर सत्रै सालमा खुलेको वीरेन्द्र इन्टर कलेज थियो त्यहाँ। त्यो बेला, त्यो दुर्गम पहाडी भेगमा गतिलो अंग्रेजी मास्टर पाउनु अहोभाग्यकै कुरा थियो। एक दिन प्रतिक्षारत मेरा कानमा सुसमाचार आइपुग्यो – काठमाडौंतिरबाट अंग्रेजीका मास्टर आउँदैछन्। मास्टर पनि लर्तरा होइन – डबल एमए, बिएल पास गरेका। त्यसमाथि अझ नाउँ चलेका लेखक पनि। मलाई दुवै हातमा लड्डु प्राप्त हुने शुभलक्षण देखियो। एक हातमा आङ्ल भाषाका पाठ्यपुस्तकको ज्ञान, अर्को हातमा साहित्यको दिग्दर्शन।
अघिअघि ठसठसी कन्दै ढाकर बोकेको भरिया, पछिपछि सानले लौरो टेकेका पाहुना – एक दिन सा”झपख वामदेव पहाडी – डबल एमए, बिएल हाम्रो कलेजको विशाल आ”गन टेक्न आइपुगे। म पुड्केभन्दा पनि सेख्खै होचा। चम्किलो तालुमाथि तेल हालेर, सिउँदो काडेर चिटिक्क कोरेको पातलो, मुलायम कपाल, ज्यानमा टम्म मिलेका कोट-प्यान्ट, घा”टीमा टाई, टलक्क टल्किने छालाका चुच्चे जुत्ता, बालकको जस्तो कोमल त्वचा भएको बाटुलो, गोरो अनुहार अनि बालककै जस्ता कन्चन आँखा – पहाडी सर नभन्दै मलाई कथामा कथिएको देवदूतजस्तै लागे।
‘नमस्कार, सर,’ स्वागत गर्न प्रतिक्षारत हामी सहपाठीको एकमुष्ट अभिवादन हावामा तरंगित भयो।
‘जुन हो नाम भन्नू,’ भाग्यवश भनू”, नवागन्तुक सरका दृष्टि ममाथि परे। मैले धकाउँदै आफ्नो नाम भने”। तिनले अघि बढेर मलाई धाप मारे।
‘जुन हो केमा पढिरहेछौ, भाइ?’
‘अब आइएमा, सर।’
‘जुन हो मेरै विद्यार्थी रहेछौ। आ”हुम्।’ यो ‘आहुम्’ नाके स्वर भएका पहाडी सरको नाकबाट निस्कने पटके खोकीको अनौठो आवाज हो। यसरी दिमागमा ज्ञानको प्रकाशवान् पन्तुरो बोकेर पहाडी सर जब आइपुगे, हाम्रो कलेजमा उत्सवी वातावरण छायो। अब भने जमाएर अंग्रेजी पढ्न पाइने भो।
भोलिपल्ट वामदेव सरको स्वागतमा सानो भेला भयो। भेलामा नाक बजाउँदै शिक्षाको महत्वमाथि सरल सूत्रमा उनले प्रकाश पारे। ‘जुन हो भाइ, प्रकाश दिने एउटा सुर्जे आकासमा छ, भन्नु अर्को सुर्जे कहाँ छ?’ अर्को सुर्जे कहा” छ भन्नु? परेन बित्यास ‘तर, ‘जुन हो’, आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफै दिदै उनले अर्थ्याए, ‘अर्को सुर्जे जुन हो शिक्षामा छ। जुन हो अघिल्लो भौतिक सुर्जे हो, र पछिल्लो हो आत्मिक सुर्जे। बस्, मेरो भन्नु यत्तिमै समाप्त भयो। आहुम्।’
केही दिन वामदेव सरको दिनचर्या औपचारिकतामै बित्यो। कलेजको सञ्चालक समितिस”ग भेटघाट र चिनारी, शिक्षकहरूसँग भेटघाट र भलाकुसारी, विद्यार्थीहरूसँग छिटफुट वार्तालाप, डेराको प्रबन्ध, रैथाने वातावरणस”ग चिनापर्ची, यस्तै-यस्तै। अनि उनी पढाउन थाले। स्पेसल इङ्लिस पढ्ने मेरो रहर थियो। तर रहर गर्ने मनुवा म एक्लो भए”। ‘अरू दुई-चारजना विद्यार्थी खोज्नू,’ वामदेव सरबाट आज्ञा भयो। ‘जुन हो भाइ, एक विद्यार्थी एक कक्षा कसरी सम्भव छ? आ”हुम्,’ मैले खोज्न सक्दो यत्न गरे”। तर स्पेसल इङ्लिस लिन कोही पनि तयार भएन। गुल्टिनलाई गाह्रो विषय किन लिनू भन्ने जिरहमा मेरा सबै सहपाठी अडिग रहे। एक दिन डेरामा डाकेर पहाडी सरले मेरो सानो अन्तर्वार्ता लिए। ‘जुन हो भाइ, भन्नू कि स्पेसल इङ्लिस नै लिन्छु किन भनिरहेछौ?’
‘अंग्रेजी सिक्न र साहित्यको ज्ञान लिन, सर।’
‘जुन हो भन्नू, एसएलसीमा कति मार्क्स प्राप्त गरेका छौ?’
‘दुई सय पूर्णांकमा एक सय दुई नम्बर, सर।’
‘आहुम्। जुन हो भाइ, फोर्टी नाइन पर्सेन्ट त फेलै भएछौ। तब भन्नू कि कसरी पढ्न सक्छौ स्पेसल इङ्लिस? जुन हो कोही ठट्टाको विषय हो यो? आहुम्, आहुम्।’
‘म कोसिस गर्छु, सर।’
पछि बडो नाटकीय ढंगले पहाडी सरको वचन परिवर्तन भयो। एकजनालाई सिंगो एउटा कक्षा किमार्थ हु”दैन भनी सञ्चालक समिति मेरो उत्कट इच्छाविरुद्ध डटेर खडा भएछ। र, धारविरुद्ध जुध्ने मति भएका वामदेव सर मेरो पक्षमा कटिबद्ध भएछन्। ‘जुन हो संख्या के हो, भाइ?’ सञ्चालक समितिछेउ घुँडा धसेर उनले तर्क गरेछन्, ‘म भन्दछु कि नागरिकको इच्छालाई निषेध गर्नु पाप हो। आहुम्।’ वामदेव सरले जिते। र, उनको जितको सिंगो लाभ मलाई हातलागी भयो।
कक्षा सुरु हुने पहिलो दिन मलाई कसोकसो अत्यास लागेर आयो। कक्षामा म फगत एक्लो छु। छोटो समयमै पहाडी सरभित्रबाट उनका अनेक छद्म औतारहरू सतहमा दृष्टिगोचर भइसकेका छन्। र, मैले अनेकथरी गाइँगुइँ सुनिसकेको छु – यो मान्छे सन्काहा हो। यो सिल्ली हो। यो क्रोधी हो। यो अर्द्ध हो। यो यहाँ धेरै दिन टिक्दैन।
मेरो मनमा एकातिर कौतुहल छ, अर्कातिर त्रास। म सर बस्ने कुर्सी कोठाको एउटा भित्तोमा र आफू बस्ने डेस्क-बेन्च अर्को भित्तोमा राख्छु। त्यो दुरी मेरा लागि एक प्रकारको रक्षाकवच हो। आएकै दिनको परिधानमा वामदेव सर काखीमुनि हाजिरी रजिस्टर च्यापेर जुत्ताको टक्टक् आवाजसँगै कक्षामा पस्छन् – आहुम्।
‘गुड मोर्निङ, सर।’ म उठेर अदप-काइदा जनाउँछु।
‘गुड मोर्निङ, आहुम्। सिट डाउन।’
उनी कुर्सीमा बसेर मलाई अलिबेर अपलक हेर्छन्। ‘जुन हो भाइ, यो दुरी किन?’ उनको प्रश्नको आसय म बुझि्दन”। ‘जुन हो ए लङ डिस्ट्यान्स बिटविन म्यान एन्ड म्यान इज नाट ए गुड थिङ। आहुम्। इट क्रियट्स कन्फ्युजन एन्ड मिसअन्डस्र्ट्यान्डिङ। जुन हो भाइ, बुझ्दै त छौ?’
‘यस, सर।’ आतेसको भावमा म मुन्टो हल्लाउँछु।
‘तब जुन हो यो दुरी कम गरिहाल्नू।’
म डेस्क-बेन्च कोठाको बीचमा सार्छु।
‘जुन हो बेबकुफ अझ निकट गर्नू।’
म चुपचाप अझ निकट गर्छु।
‘द्‌याट्स गुड। आहुम्, आहुम्।’
‘यो विषय कठिन छ। बहुत मिहेनत गर्नुपर्छ। कदापि थाक्नु हुँदैन। हिम्मत हार्नु हुँदैन। जुन हो भाइ, निरन्तर चेष्टा गरे सम्भव नहुने कुरा के छ? आ”हुम्।’ पहाडी सरले एवंरीतले मलाई हौसलाकारी अर्ती दिए। आधाजसो सनातनी बिहारी उच्चारणको अंग्रेजीमा र आधाजसो हिन्दी मिसिएको वर्णशंकर नेपालीमा।
तर, हप्तादिन बित्नु के थियो कक्षामा पहाडी सर रौद्र रूपमा प्रकट भए। उनी मलाई फ्रान्सिस बेकनको निबन्ध पढाउँदै थिए। निबन्धमा स्प्लिन अर्थात् फियोको प्रसंग आयो। के हो कुन्नि उनले मलाई एउटा प्रश्न सोधे। प्रश्नै बुझ्नु छैन, म लम्फु के उत्तर दिऊ”? एकाएक सन्किएर उनले गर्जन गरे, ‘जुन हो बेबकुफ, स्ट्यान्ड अप आन दि डेस्क।’ लौ, तालुले आज बिताउने भो के गर्नु न के गर्नु भएर म त्यसैत्यसै रनभुल्ल परे”।
‘वामदेव पहाडी इज डिक्टेटिङ, जुन हो महामुजी † स्ट्यान्ड अप आन दि डेस्क।’ मैले चाक टेकाउने बेन्चमा खुट्टा टेकाए”। यसो डेस्क हल्लाइहेरे”, त्यो धराप थियो। र, पाखे अंग्रेजीमा त्रस्त स्वरमा याचना गरे”,’सर, इट इज विक। आई विल फल डाउन।’ ‘जुन हो भाइ, इङ्लिस पो बोलिरहेछौ, आहुम्।’ एकाएक उनको क्रोध साम्य भयो। र, रिसको पारो झरेको नरम स्वरमा उनले भने, ‘जुन हो, तल झर्नू।’ म तल झरे”। ‘जुन हो भाइ, पूर्ववत् बस्नू।’ म पूर्ववत् बसे”। अनि उनले प्रश्नको अर्थ पहिले नेपालीमा खुलाए। र, त्यसपछि ब्ल्याकबोर्डमा अंग्रेजीमा लेखिदिए। ‘जुन हो, संग्रौला”जी, अब त केही बुझ्नुहुन्छ कि?’
‘जुन हो बेबकुफ चेष्टै गर्दैनौ त भु”त्रो बुझ्दछौ? आहुम्।’
सत्संग गर्दै जा”दा मलाई वामदेव पहाडीको मनोरचनाको राम्रैस”ग तत्वबोध हु”दै गयो। लाग्यो, उनको सनक र संयमबीचको र क्रोध र करुणाबीचको दुरी धेरै छोटो छ। पानीका फोकाको यात्राकै दुरीजस्तो। वर्षातमा पानीको फोको उठ्छ, रहमा अलि परसम्म सलल्ल बगेर जान्छ र प्याट्ट फुट्छ। बस्, किस्सा खत्तम। तैपनि पहाडी सरस”ग डर भने सधैं नै लागिरहने। मेरा लागि उनी एकसाथ आकर्षणकारी र विकर्षणकारी मनुवा हुन गए। टाढा हु”दा नजिक परू”परू” लाग्ने, नजिक भयो कि कसोकसो डर लागिरहने। तर, आकर्षण र त्रासको द्वन्द्वमा सधैं नै मेरो त्रासलाई आकर्षण पक्षले परास्त गरिदिन्थ्यो। र, मैले पहाडी सरलाई मियो बनाएर त्यसको वरिपरि परिक्रमा गरिरहे”।
त्यो बेला दार्जिलिङमा तेस्रो आयाम नामक प्रयोगशील लेखनशैलीको रजगज राज चलेको थियो। आयामेली उमंगले निकटवर्ती आठराईको साहित्य लेखन अभियानमा राम्रैसँग राप र ताप सञ्चार गरिदिएको थियो। र, मेरो कलेज ’roundको भूगोलमा तेस्रो आयामका बाल सुगाहरू भटाभट जन्मिरहेका थिए। ती दुरुह, क्लिष्ट र अबोधगम्य लेख्नु नै गजप लेख्नु हो भन्ने भ्रमको झुत्रे झन्डा बोकेर धक्कु लाउ”दै लुखुर-लुखुर हि”ड्थे। मेरा सहपाठीत्रय गंगाप्रसाद उप्रेती, यज्ञराज प्रसाईं र जयप्रसाद उप्रेती यस मोर्चाका जौडे जोदाहा थिए। वामदेव सर बुझनी न सुझनीको यो सुगाप्रवृत्तिप्रति अत्यन्तै क्षुब्ध थिए। उसो त तेस्रो आयामका माउ अभियन्ताहरूका कतिपय ताल न तुकका रचनाहरूको पनि उनी खुलेरै खिल्ली उडाउ”थे। झमझम पानी परेर विशाल वटवृक्षमुनि जमेको पानी हेर्दै पहाडी सर क्यारिकेचर गर्थे :
‘जुन हो माथि छ वरको रुख
तल जुन हो दहमा तपतप पानी
जुन हो दहमुनि भ्यागुत्तो ट्वारट्वार
आ”हुम्, मेरी प्रेमिका तिमी सुत।
‘यो पनि कुनै कविता हो, बेबकुफ? तर, जुन हो केही महामु..हरू कर्कस हल्ला गर्दै भनिरहेछन् कि यो नै सानदार कविता हो। जुन हो म वामदेव पहाडी डबल एमए, बिएल भन्दछु कि कविताको नाममा यो सफेद हुल्लडबाजी हो। आ”हुम्।’
त्यो बेला म साहित्य पठन र लेखनको बाल विद्यार्थी थिए”। ममा रुचि र रहर त उत्कट थियो, तर ज्ञान र सीप भने केही पनि थिएन। झो”कैझो”कमा वामदेव सरले मलाई ऊबेलाको नेपाली साहित्यका चर्चित कर्ता, प्रवृत्ति र द्वन्द्वहरूको आरम्भिक जानकारी गराए। ऊबेला तेस्रो आयामका हस्तीत्रय त चर्चामा थिए नै, ताना सर्मा र शंकर लामिछाने, पारिजात र प्रेमा शाह पनि चर्चामा थिए। यस कुराको सुइ”को पाइने माध्यम ‘रूपरेखा’ थियो। मेरा काका दिलिप र दाइ भीष्म संग्रौला, मावली दाइ भूपाल र यज्ञराज खरेलहरू ‘रूपरेखा’का ग्राहक थिए। उनैस”ग मागेर म ‘रूपरेखा’ पढ्थे”। मलाई डोर्‍याएर ‘रूपरेखा’सम्म पुर्‍याउने अगुवा वामदेव सर नै थिए।
आ”हुम्। शिरीषको फूल र लामिछानेको टोपी †’ यसरी वामदेव सरको कटाक्षको तीर छुट्थ्यो। …जुन हो भाइ, शंकर लामिछानेले पारिजातको शिरीषको फूल नामक उपन्यासको शरीरमा भूमिका नामक टोपी पहिराइदिए। र, छलकारी टोपी नै शरीर हो भन्ने भ्रमको जन्म भयो। भन्नू बेबकुफ † शिरमाथिको टोपी कसरी शरीर हुनसक्छ? आ”हुम्, आ”हुम्।’
वामदेव सरको बेबकुफले शिरीषको फूल पढेकै छैन, बरा ऊ के भनोस्?
‘आ”हुम्, ताना सर्मा †’ अर्को प्रसंगमा ताना सर्मा वामदेव सरको प्रहारको निसान बन्थे। ‘जुन हो भाइ ताना सर्मा भन्दछ कि म मार्क्सवाद बुझ्छु”। आ”हुम्। जुन हो वामदेव पहाडी डबल एमए, बिएल मार्क्सवाद बुझ्दैन त बेबकुफ ताना सर्मा के बुझ्दछ? भाइ † मार्क्सिज्म इज नाट ए जोक क्या। त्यो त जटिल ज्ञानको सागर पो हो, भाइ। आ”हुम्।’
वामदेव सरका वचनमा घरिघरि आइरहने एउटा प्रिय नाम थियो ऊबेला चर्चित रहेको ‘पहेँलो गुलाफ’ कथाकी स्रष्टा प्रेमा शाह। प्रेमा शाह वामदेव सरकी एमए अंग्रेजीकी सहपाठी। जब प्रेमा शाहको प्रसंग उठ्थ्यो, वामदेव सरको स्वर भित्रभित्रै दबिन्थ्यो। त्यो स्वरमा सन्तापजस्तो, पश्चात्तापजस्तो के-केको विरहव्यथा ध्वनित हुन्थ्यो। मलाई सम्झना छ, प्रेमा शाहको चर्चा प्रायः प्रच्छन्न शैलीमा हुन्थ्यो।
साहित्य चर्चा दार्जिलिङबाट थालिएर काठमाडौंको फेरो मार्दै रैथाने परिवेशमा खुत्रुक्क ओर्लिन्थ्यो। ‘भाइ, हाम्रा पण्डित भानुभक्त पोख्रेललाई पनि जुन हो म ठूलै कवि हु” भन्ने घमण्ड छ।’ नेपालीका मेरा कुशल गुरु र साहित्ययात्राका मेरा असल साथीमाथि वामदेव सर यसरी धावा बोल्थे, ‘जुन हो भाइ, जीवनमा यति धेरै असंगति, जटिलता, रहस्य, अलमल र भद्रगोलहरू छन्। छन्दको खोरमा जीवनका यी सब जन्जालहरू कसरी अटाउँछन्, बेबकुफ? भन्नू, स्वरको लयदार नर्तन थोडै कविता हो? आहुम्।’
र, आखिरमा साहित्य चर्चाको लहरो तेह्रथुम, साबलाका ऊबेलाका अभिनारायण सुवेदीमा थुरिन पुग्थ्यो। अभि दाइ ऊबेला ‘रूपरेखा’मा किस्ताकिस्ता गरी चालु कवितायात्राको प्रवृत्तिगत विवेचना गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका गिए। औद्योगिक क्रान्ति नै नभएको नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिले पैदा गर्ने असंगति र अप्ठ्याराहरू भिœयाएर कविहरू अनेपाली टाइपका कविता रच्दैछन् भन्ने उनको जब्बर जिरह थियो। र, त्यो जिरहमा वामदेव सरको मतैक्य भएझैं लाग्थ्यो। ‘जुन हो भाइ, अभिनारायण सुवेदी भन्ने लडको खुबै लेख्न खोजिरहेछ।’ उनी भन्थे, ‘जुन हो ऊ केही न केही पढ्दछ, केही न केही बुझ्दछ, केही न केही सोच्दछ र केही न केही लेख्दछ। मोर्निङ सोज दि डे’को मत्लब बुझ्दछौ बेबकुफ?’
‘जुन हो बेबकुफ जे बुझेका छौ त्यो भन्नू।’
‘दिन कस्तो हुने हो बिहानीले देखाउ”छ, सर।’
‘आ”हुम्। ठिकै त बुझिरहेछौ, भाइ। त्यो लडकोका पदचिन्ह टेकेर हि”ड्न चेष्टा गर्नू। जुन हो भाइ, भु”ट्ट कही” न कही” पुगिहाल्छौ।’
रह”दा-बस्दा एक दिन वामदेव सरको विद्रूप रूप गोचर हुनगयो। छक्क पर्दै हेरे”, हे दैव † वामदेव सर त चर्को स्वरमा बर्बराउ”दै बाटामा लम्पसार परेको ढुंगोलाई जुत्ता र छाताले भकाभक गोदिरहेका छन्। सोचे”, आज भने जुन हो यी बेबकुफ पूरै बौलाएछन्। डर लाग्यो। उनका आ”खा छलेर कान्लामुनिबाट लुसुक्क अगाडि जाऊ” कि भन्ने लाग्यो। तर कुन प्रेरणा र आकर्षणले घिसारेर र घ”चेटेर हो, म त झ्वास्सै उनका अगाडि पो पुगे”। मलाई देखेर झन् हौसिंदै र पत्थरमाथि झन् जोडले प्रहार गर्दै उनी बर्बराए, ‘जुन हो बेबकुफ कसको खुट्टामा ठेस लगाइरहेछौ? जुन हो महामु.. वामदेव पहाडी डबल एमए, बिएललाई ठट्टा सम्झेर जोरी खोजिरहेछौ? आ”हुम्, आ”हुम्, आ”हुम्।’ तर, वामदेव सरको त्यो उग्र, प्रचण्ड झो”क छिनभरमै शान्त भयो। र, हल्का हा”सो घोलिएको स्वरमा उनले समापन कथन जारी गरे, ‘जुन हो खगेन्द्रजी, जीवनमा व्यवधान पैदा गर्ने कुतत्वहरू बहुतै धेरै भए। कहिलेकाही” त लाग्दछ कि जुन हो भु”ट्ट पड्किएर जिन्दगीलाई खरानी बनाइदिऊ”। आहुम्।’
किन हो थाहा छैन, वामदेव सर नजानिदो गरी मलाई धेरै माया गर्थे। यस कुराका अनेकमध्ये एक अविस्मरणीय सबुतको कथा यहा” कहन्छु। तिनताक हेमन्तबहादुर बिसी विद्यार्थी फेडरेसनका सभापति वा यस्तै केही थिए। तिनले काठमाडौंमा कलेजव्यापी निबन्ध प्रतियोगिताको चा”जो मिलाएछन्। प्रतियोगितामा भाग लिने दुई सत्पात्र चयन गर्न हामीलाई निबन्ध लेख्न लगाइयो। निबन्धको एउटा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ थियो र अर्को विषय थियो आमाको ममता। मैले अनुभव र कल्पनाको लेपन लाउन मिल्ने विषय ठानेर आमाको ममता रोजे”। गजप लेखे” भनेर नाक घोक्रयाउँदै मैले भानुभक्त बाजेको कान्तिपुरी नगरी हेर्न जान खुट्टा उचालिसकेको थिए”। एक बेलुका चौकिदार मेरो होस्टलमा आएर भने, ‘प्रिन्सिपल सरले डाक्नुभा’छ।’ सुन्दैमा म झस्के”।
वामदेव सर गुत्थ फुलेर ओछ्यानमा बसेका थिए। अगाडि टेबुलमा मेरो निबन्ध थियो। निबन्ध हरफैपिच्छे रातो मसीले रंगिएको थियो र फड्के किनारमा पनि कमिलाको गोलोसरी राताम्मे अक्षरहरू थिए। त्यो देखेर म खङ्रंगै भए”। काठमाडौं जाने मेरो रंगीन सपनामा आगलागी भयो। ‘जुन हो त्यही” खडा हुनू,’ मैले ढोकाभित्र पाइला टेक्नासाथ वामदेव सर गर्जिए। टेबुलको राताम्मे निबन्धमा खरानी भएको आफ्नो सपनालाई मर्माहत दृष्टिले हेर्दै म मूर्तिवत ठिंग उभिए”। ‘जुन हो खुट्टा उठाउनू,’ दण्ड भोग्ने कसुर बुझ्दै नबुझी मैले आतेसको भावमा दाहिने खुट्टो उचाले।” ‘जुन हो बेबकुफ दुवै खुट्टा उठाउनू।’ म किंकर्तव्यविमूढ भए”। ‘जुन हो महामु’ धरती छोडेर हावा टेकेर हि”ड्नू’ भन्न खोजेको के हो भुत्तिभाङ केही नबुझी म अवाक, अचल र निस्तेज भए”।
कसुर मेरो निबन्धको बान्कीको रहेछ। वामदेव सरका नजरमा त्यो बतासे भावुकताले टनाटन भरिएछ। र नै मौकामा एक राउन्ड प्रशिक्षण दिने मनसुवाले उनी त्यसरी प्रस्तुत भएका रहेछन्। ‘जुन हो भाइ, जिन्दगी धरती टेकेर खडा हुन्छ। विचार पनि जुन हो धरती टेकेरै खडा हुन्छ। र बेबकुफ भावुकता, भावना, संवेदना जे छ त्यो सब पनि धरती टेकेरै खडा हुन्छ। तब जुन हो महामु.. खुबै कल्पनाशील छु भन्ठानेर यो हावादारी गफ के लेखिरहेछौ?’ अलिबेर कोठामा सघन सन्नाटा छायो। अनि बिस्तारै वामदेव सरका अनुहारको भाव र भंगिमा फेरि”दै गयो। ‘जुन हो भाइ, निराश भइहाल्यौ? आ”हुम्।’
‘जुन हो बेबकुफ निराश नहुनू।’
वामदेव सर शान्त भए। र उनका सुझावहरूबमोजिम निबन्ध सच्याउने सर्तमा मलाई पासको अग्रिम बधाई दिए, …जुन हो भाइ, एडभान्स कङ्ग्य्राचुलेन्स। आहुम्।’
करिब चार महिनापछि अर्को एक साँझ वामदेव सरले त्यसैगरी मलाई डाकिपठाए। उनी रिसले बुमबुम भएका रहेछन्। ‘जुन हो भाइ,’ उनको सनातनी गर्जन सुरु भइहाल्यो, ‘काठमाडौंमा सुर्जेबहादुर थापाले भारुको सापेक्षमा नेरुको अवमूल्यन गर्‍यो त भन्नू, पदमप्रसादजीको फर्सीको डा”क्लामा त्यसको के असर परिहाल्यो? आहुम्।’ कुरो के रहेछ भने अवमूल्यनलाई आधार बनाएर वामदेव सरले भान्सा गर्ने घरका मूली पदमप्रसाद उप्रेतीले भान्साको भाउ बढाउन चाहेछन्। पदमप्रसाद मेरा भान्दाइ। जमानामा दार्जिलिङमा पा”च-सात कक्षा पढेका उनै पदमप्रसादले अघि लागेर कलेज खोलेका थिए। उनी रैथाने बस्तीको आर्थिक, सामाजिक र संस्थाका वर्चस्वशाली हस्ती थिए। र, वामदेव सरसँग उनको अहंको भयंकर टक्कर थियो। म अर्को घरमा पेइङ गेस्ट थिए”। भान्साको भाउवृद्धिको अवज्ञा गर्ने कुरामा वामदेव सर र मेरो एकसूत्रीय सहमति बन्यो।
‘चुपचाप सहँदै जाँदा जुन हो भन्नू भाइ के हुन्छ?’
‘के हुन्छ, सर?’
‘यी महामुहरूले चुसेर जुन हो हामीलाई सिद्रो बनाइहाल्छन्।’
वामदेव सरको पदमप्रसादस”गको अहंको टक्कर चुलियो। र उनी झोलीतुम्बा बोकेर बाटो लागे। बाटो लाग्दालाग्दै उनले भनेथे, ‘जुन हो भाइ, वामदेव पहाडीले यो माटोमा स्वाभिमानको सानो दृष्टान्त छाडेको छ, याद गर्नू। आहुम्।’
धेरै वर्षपछि तीस सालमा क्षेत्रपाटीको नौलो रेस्टुरा” नजिकै उनको डेरामा वामदेव सरसँग मेरो भेट भयो। मित्रवत् भाकामा उनले मेरो लेखनको तारिफ गरे, ‘जुन हो भाइ, आफ्नो विद्यार्थीले केही गरेको देख्दा आनन्द लाग्दोरहेछ क्या। आ”हुम्। तर ख्याल गर्नू भाइ, मानिसले फुर्किएर जब धरती छाड्छ, ऊ जुन हो हावामा भु”ट्ट विलीन भइहाल्छ। आ”हुम्, आ”हुम्।’ अनि छोटो भूमिका बा”धेर उनले भने, ‘जुन हो राम्रो पढ, भाइ। अब दस वर्षमा भुट्ट कम्युनिजम आइहाल्छ। कम्युनिजममा जुन हो प्रा”पर म्यान इन् द प्रा”पर प्लेस हुनेछ। आहुम्, आहुम्।’
वामदेव सरसँग त्यो मेरो अन्तिम भेट थियो। पछि उनलाई जिब्राको क्यान्सर भयो। जिब्रो काटियो। र, उनको एकबारको जुनी अकालमै सकियो। सतहमा असामाजिक लाग्ने वामदेव सर विचारमा वागी र झुकावमा मानवतावादी थिए। जब उनको याद आउँछ, उनी मेरो स्मृतिको पर्दामा विचरण गर्दै मलाई भनिरहन्छन्, जुन हो बेबकुफ धरतीका कुरा। आहुम्, आहुम्।
From → खगेन्द्र संग्रौलाका लेखहरू (Articles of Khagendra Sangraula), लेखहरू (Articles)
« ब्रम्हा, विष्णु र महादेव: को ठूलो?
अनपत्यारिला तथ्यहरु (रोचक तथ्यहरु भाग-९), Amazing Facts »